Tinye akara ngosi Twitter na Blog gị | Martech Zone
Tinye akara ngosi Twitter na Blog gị
Anaghị m etinye oge dị ka ọ masịrị m na Twitter, mana ọ kwadoro onwe ya dị ka nnukwu ngwa ọrụ - yana ọtụtụ ojiji dị iche iche. Otu n'ime ihe ndị ahụ eji m eme ihe bụ iji ya iji kpọsaa ihe m na-arụ ọrụ na-akpaghị aka ka ndị na-eso ụzọ m mara mgbe m bipụtara na blọọgụ m. Ọ na-akpaghị aka na-eji Twitter Updater Plugin maka WordPress.
Ọ na-enwetatụbeghị nke mere na m kpebiri itinye ya na nchịkọta m Achịcha, akara ngosi Email na Mobile n’akụkụ m. Gbalịa ka m nwere ike ịchọta akara ngosi, agbanyeghị, abịaghị m na net ọ bụla. Ya mere - ekpebiri m ime nke m:
Enwere onwe gị budata niile Oyiyi Twitter na ọbụna faịlụ Illustrator m ji hazie ha. Ebe ọ bụ na abụghị m onye omenkà eserese, achọghị m ịma ebe na otu ị si eji ha ma ọ bụ na ị meziwanye ha. Olile anya, Twitter emeghi kwa!
Nweta nke gị T-uwe elu Twitter, Kwa!
Tags: akara ngosi twitteronye nlere twitter
Mee Ka Ọdịnaya Gị Dị Ọhụrụ! Gụnyere Nkwupụta
Mee 10, 2008 na 3: 29 PM
Nnukwu ọrụ! Nnọọ mmesapụ aka ịkọrọ dị ka nke a…
Mee 10, 2008 na 6: 47 PM
Daalụ! Ọ bụghị ihe ọ keepingụ idebe onwe gị ihe a, Steve!
Mee 11, 2008 na 8: 11 PM
Daalụ nke ukwuu maka ịkekọrịta akara ngosi ndị a. Ha bụ naanị ihe m na-achọ ịgbanwe site na 'Twitter Boxes' m na-eji ruo ugbu a.
Agbakwunyere m akara ngosi ugbua na sidebar nke blọọgụ m ma ọ dị mma.
Mee 12, 2008 na 2: 23 AM
Naanị m gbakwunyere ngwa mgbakwunye a ma ewepụ ichetaghị adreesị ozi-e m na m debara aha akaụntụ twitter m na (doh!) Ọ na-arụ ọrụ dị ka ọgwụgwọ ozugbo m tinyere nke ziri ezi. Daalụ.
Mee 12, 2008 na 8: 03 AM
Thehụnanya akara ngosi! Knowsnye maara, ma eleghị anya, ị mepụtara akara ngosi Twitter ọhụrụ. M ga-ahụ ma ọ bụrụ na m nwere ike na-enweta nke a afanyekwa na ọhụrụ web saịtị tupu ya igba egbe mechara nke a izu.
Mee 13, 2008 na 5: 37 AM
Hụrụ ihe oyiyi ahụ n'anya, daalụ maka ịkekọrịta ha.
Aug 14, 2008 na 10:27 PM
Daalụ maka akara ngosi. Ana m eji ya na saịtị m!
Sep 1, 2008 na 1:21 PM
Doug, ị were ọgwụ zuru oke ma ọ bụ ihe ọ bụla? Cuz nke a bụ naanị Zuru Ezi. Naanị m na-eche banyere ịgbakwunye Twitter na blọgụ nkeonwe m na ntanetị web design m. Na BAM, lee ha!
Ọzọkwa, dịka ngwa mgbakwunye Formdị kọntaktị gị, ngwá ọrụ pụrụ iche ma baa ezigbo uru.
Sep 1, 2008 na 1:58 PM
Daalụ Joni! Dị obiọma.
Sep 29, 2008 na 8:41 PM
Chei, zuru oke! Naanị m Googled ịchọta akara ngosi twitter mara mma mgbe m kwụsịrị ịchọ ihe na twitter. Ọrụ dị mma, m ga-ejikwa nke a n'ọtụtụ ebe dịka m nwere ọtụtụ saịtị.
Dee 21, 2008 na 12: 18 AM
Daalụ maka onyinye mmesapụ aka a. Emejuputala m onyonyo onyonyo na blọọgụ m ma ọ rụọ ọrụ dika amara.
Feb 28, 2009 na 6:49 PM
Daalụ maka ịkekọrịta. Ejiri akara ngosi twitter na profaịlụ LiveJournal m.
Mar 7, 2009 na 12: 20 AM
Daalụ, Doug. Ugbu a na-amalite saịtị na Blogger na m na-achọ ihe ngosi Twitter dị jụụ, ibe a gbagoro n'elu nsonaazụ. Daalụ, ọzọ, ị ga - ejide n'aka na m ga - anọ ebe a, saịtị a bụ akụ nke ozi na akụrụngwa.
Mar 8, 2009 na 12: 47 AM
Daalụ maka ihe oyiyi twitter - 50 x 50 ji nganga gosipụta ugbu a.
Mar 18, 2009 na 5: 02 PM
Daalụ maka iji akara ngosi gị.
m nọ na twita aswell.
na-amụta ịmalite blọgụ nke m.
na-akpọtụrụ maka mmelite nke akara ngosi gị ga-egosipụta.
Mar 20, 2009 na 1: 15 AM
Daalụ maka ịme akara ngosi Twitter ndị a ka ọ dị. Naanị m zitere otu na blọọgụ m.